Athletico Madrid Oo Markale Faa'iido Heshay Maxay Tahay Sababta.
Home Horyaalka Spain Athletico madrid oo markale Faa’iido heshay maxay tahay Sababta.
Athletico madrid oo markale Faa’iido heshay maxay tahay Sababta.
Kooxda athletico madrid ayaa heshay fursad kale oo ugu sii dhawaan karaan ku guuleysiga horyaalka xilli ciyaaredka kadib markii kooxda Real madrid gurigeeda 1-1 Kula dhaafi weysay real sociedad ciyaar iyagaba ay badbaadeen waqtigii dhimashada.
Kooxda Diego Simeone ayaa heysata kulan baaqi ah iyadoona xilligaan hogaanka ku heysa 5 dhibcood hadii ay badiyaan kulanka baaqiga ah waxaa hogaanka ku heyn doonaan 8 dhibcood oo nadiif ah iyagoo hafa leh 58 dhibcood kuna darso in maalinta axada ay kulan la yeelan doonaan Real madrid.
Barcelona iyo real madrid ayaa isku dhibco ah waxaana ay wada leeyihiin min 53 dhibcood waloow farqiga goolasha barcelona ugu jirto booska labaad halka booska Afaraad ay fadhiso Sevilla oo leh 48 dhibic kooxda shanaad waa Real Sociedad oo leh 42 dhibic.
Previous articleDaafaca kooxda Manchester City Ruben Dias oo Tilmaamay sirta ka dambeysa guulahooda.
Next articleWeeraryahan horey uga tirsanaa kooxda Liverpool oo geeriyooday